Ratsy ve ny hoe Be Mpitia? | Tanora
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Boligara Cebuano Chichewa Cinghalais Danoà Espaniola Failandey Frantsay Grika Géorgien Hiligaynon Holandey Hongroà Ibo Iloko Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kantôney Nentim-paharazana Koreanina Kroaty Litoanianina Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Norvezianina Poloney Portogey (Brezila) Romanianina Rosianina Serba (Sirilika) Sesotho (Lesotho) Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tailandey Tiorka Tseky Tsonga Zoloa
Fenoy amin’ny iray amin’iretsy teny iretsy ny banga:
․․․․․ ny hoe be mpitia.
A. Tsara foana
B. Tsara indraindray
D. Tsy tsara mihitsy
ILAY “B” no valiny marina. Nahoana? Satria tsy ratsy foana ny hoe tian’ny olona. Nilaza mialoha ny Baiboly fa ho “fahazavan’ny hafa firenena” ny Kristianina ary hanatona azy ireo ny olona. (Isaia 42:6; Asan’ny Apostoly 13:47) Azo lazaina hoe be mpitia àry ny Kristianina.
Tian’ny olona i Jesosy. Mbola kely izy dia efa nahazo “sitraka tamin’Andriamanitra sy ny olona.” (Lioka 2:52) Lazain’ny Baiboly koa fa “nisy vahoaka be nanaraka azy” rehefa lehibe izy. “Avy any Galilia sy Dekapolisy sy Jerosalema sy Jodia ary avy any ampitan’i Jordana” izy ireo.—Matio 4:25.
Nahoana izany no tsy ratsy?
Satria i Jesosy tsy nitady voninahitra na niezaka ny ho be mpitia, ary tsy nila sitraka tamin’olona. Nanao izay mety fotsiny izy, ary izany indraindray no nahatonga azy ho tian’ny olona. (Jaona 8:29, 30) Takatr’i Jesosy koa fa tsy hoe hankasitraka azy foana ireo vahoaka mora miova hevitra ireo. Fantany fa hamono azy izy ireo any aoriana.—Lioka 9:22.
Toy ny harena ny hoe tian’ny olona. Tsy hoe ratsy foana izany. Ny ataon’ny olona mba hahazoana sy hihazonana azy no olana.
Maro ny tanora manao izay ho afany mba ho tian’ny olona. Mila sitraka amin’olona ny sasany ka manao izay ataon’ny hafa fotsiny. Ny hafa kosa mihetraketraka ka tereny ho tia azy ny olona, na dia hoe noho ny tahotra fotsiny aza. *
Tsy hoe lasa be mpitia izay manao an’ireo. Misy zavatra tsara kokoa azo atao anefa. Izany no asehon’ny pejy manaraka.
^ feh. 12 Miresaka momba ny mpihetraketraka ny Baiboly ary nantsoina hoe “Nefilima” na “lehilahy nanan-daza” izy ireo. Izay hahazoany voninahitra no tena niriny.—Genesisy 6:4.
TE HO BE MPITIA KA...
MILA SITRAKA AMIN’OLONA
Te hahazo sitraka amin’ny hafa aho.
Tsy maintsy manahaka azy ireo àry aho.
“Te hitovy amin’ny hafa aho ka niezaka ny hiova. Hoatran’ny nety izany tamin’ny voalohany. Hitako anefa hoe tsy tsara mihitsy izany, raha ny mba heken’ny hafa fotsiny no antony.”—Nicole.
Toro lalan’ny Baiboly: ‘Aza manaraka ny maro mba hanao ratsy. Aza miandany amin’ny maro mba hamadika ny rariny.’—Eksodosy 23:2.
Efa tian’ny olona aho ary tsy tiako hiova mihitsy izany.
Na tsy maintsy mampijaly ny hafa aza aho, dia hataoko izay azoko atao mba ho izaho foana no be mpitia indrindra.
“Matetika ny ankizy no ratsy fanahy ary lamaody ny mihetraketraka, ka mieritreritra ny ankizy saro-kenatra hoe marina foana izay tenenin’izy ireny.”—Raquel.
MITADY FOMBA TSARA KOKOA
Marina fa mety hisy olona tsy ho tia anao intsony raha manaraka an’ireo voalaza eo ankavia ireo ianao. Ho tian’ny olona tsara toetra anefa ianao.
Fantaro ny fitsipika arahinao. Milaza ny Baiboly fa “efa nozarina hanavaka ny tsara sy ny ratsy” ny olona matotra.—Hebreo 5:14.
Aza miala amin’izay inoanao. Tahafo i Josoa, izay sahy nilaza hoe: ‘Fidio anio izay hotompoinareo. Fa izaho sy ny ankohonako kosa hanompo an’i Jehovah.’—Josoa 24:15.
Matokia hoe mety ny ataonao. Nampahatsiahy an’i Timoty ny apostoly Paoly hoe: “Andriamanitra tsy nanome antsika toe-tsaina kanosa, fa toe-tsaina feno hery.”—2 Timoty 1:7.
Melissa: Marina fa afaka manao hoatran’ny ankizy rehetra any am-pianarana fotsiny ianao. Mankaleo be anefa izany. Mampiavaka anao kosa ny hoe Kristianina, ary tsy lasa hafahafa ianao raha Kristianina fa lasa tian’ny olona.
Ashley: Tsaroako hoe tsy be mpitia aho tany am-pianarana. Namonjy fivoriana kristianina anefa aho ary tena tia ahy ireo namako tany, ka tsy dia nahaliana ahy intsony ny hoe ho be mpitia tany am-pianarana.
Phillip: Mila mihevitra izay hahasoa ny hafa ianao raha te ho tian’izy ireo. Nanandrana nanao zavatra tsotsotra ho an’ny namako aho tato ho ato, ka lasa nifankatia kokoa izahay.
Misy olona mahavita manao zavatra mety hahafaty azy mihitsy mba ho be mpitia sy ho be mpanaraka ao amin’ny tambazotran-tserasera. Tena ilaina ve anefa izany?
Hizara Hizara Ratsy ve ny Hoe Be Mpitia?
Soratra Fandikana boky MIFOHAZA! Martsa 2012
Hizara Hizara MIFOHAZA! Martsa 2012
MIFOHAZA! Martsa 2012